Global Voices teny Malagasy » Voaroaka Ny Ministra Ao Kazakh Nohon’ny Fanakianan’ny Mponina Anaty Aterineto Ilay Drafitra Fisotroan-dronono · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Jona 2013 1:32 GMT 1	 · Mpanoratra Bermet Zhumakadyr kyzy Nandika nirinandrea
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Kazakhstan, Fitantanam-pitondrana, Hehy, Mediam-bahoaka, Politika, Sendikà, Vehivavy sy Miralenta
Nahatonga fanehoan-kevitra tsy fahita firy teo amin'ireo olona efa eo an-dalàn'ny taonan'ny fisotroan-dronono ao Kazakhstan ilay fanentanana haneho hevitra tao amin'ny Facebook, niompana tamin'ilay fikasan'ny governemanta hanova ny lalàna mikasika ny fisotroan-dronono izay tsy hakany mialoha ny hevitry ny mponina akory. Niongana ilay Minisitry ny Raharaha Sosialy ao amin'ny Repoblika taorian'ilay hadisoana nataony imasom-bahoaka izay naha-afa-baraka azy tokoa, raha toa ilay lehilahy matanjak'i Kazakhstan, ny filoha Nursultan Nazarbayev, ka efa nanao sonia maro ho fanitsiana ilay tolo-dalàna.
Mety hitondra fanovàna goavana ilay tolo-dalàna mikasika ny fisotroan-dronono tsy nalàza iny : hampiakatra ny taonan'ny fisotroan-dronono ho 58 hatramin'ny 63 taona ho an'ireo vehivavy izany, hahatonga ny tsy maintsy hanaovana latsankemboka ao amin'ny tetibolam-panjakana ho an'ny fisotroan-dronono, ary hampiakatra ny andraikitry ny fanjakana amin'ny fitantanana ny tetibola fisotroan-drononon'ireo orinasa tsy miankina. Nisedra  fanoherana mivaivay avy amin'ny vahoaka ilay tolo-dalàna, indrindra ilay fanemorana ny taona fitsaharan'ny vehivavy, araky ny fantatra anefa dia 67 taona ihany ny fahelàna velon'ireo vahoaka ao Kazakhstan. Ny fiakaran'ny  tsy fisian'ny fitoviana ara-sosialy sy ara-toekarena ao Kazakhstan no mandrehitra ny afon'ny fifanakalozan-kevitra mikasika ilay tolo-dalàna .
Iray amin'ireo mpitondra teny avy amin'ilay fanovàna ny lalàna mikasika ny fisotroan-dronono, Serik Abdenov  [ru], Ministry ny Asa sy ny Fiarovana Ara-sosialy fahiny, no lasa kisarisarin'ny tsy fahaiza-manaon'ny tomponandraikitra vantany vao nivoaka voalohany ho fanta-bahoaka ilay tolo-dalàna. Efa tany amin'ny 26 Aprily izy no voatoraka atody  nandritra ilay famoriana mpanao gazety niresahana ilay fanovàna lalàna momba ny fisotroan-dronono. Taorian'izany, raha tafaresaka taminà andianà mpiasa voakasik'izany tao an-tananàn'i Temirtau , dia nisy nanontany azy n y antony anampiana dimy taona ny an'ireo vehivavy. Abdenov namaly hoe  [ru] “Mila miasa ary miasa hatrany isika, satria, ry mpiray tanindrazana amiko, satria, satria.” Lasa nalaza  ilay lahatsary ary lasa “meme” “патамушта-патамушта” – “satria-satria”, natao diso fanoratra mba hampihomehy, nampiarahana tamin'ny sarin'ireo vehivavy mitazona taratasy misy soratra manao hoe “Mila miasa aho hatramin'ny faha 63 taonako satria satria”.
Vehivavy iray mitazona soratra mivaky hoe “Mila miasa aho hatramin'ny faha 63 taonako satria-satria …. niparitaka be. Nakarina voalohany tao amin'ilay pejy facebook “патамушта-патамушта”.
“Satria, satria manao izay tiany hatao foana izy ireo”
Ny fahatsapàna ankapoben'ireo mpisera anaty aterineto dia ny hoe mety ireo mpiasa tsy ampiampy no nanolotra ilay fanavaozana, izay tsy miraharaha akory na dia ny hanazava ny tanjon'ilay fanovàna iny lalàna iny aza.
Hoy i Assel Khodzhi  [ru] tao amin'ilay pejy Facebook-n'ny “Satria Satria” natao ho an'ny daholobe :
Satria ny zavatra rehetra vita fotsiny satria, ataon'izy ireo izay tiany atao ary tsy miraharaha ny olona izy ireo!
Misy ireo hafa mpisera ety anaty aterineto no sahy manendrikendrika ireo mpiasam-panjakana ho mandalilany foana ny volam-bahoaka. Nilaza i WoOTTw  [ru] tao amin'ilay lahatsary momba ny zava-misy nakarina tao amin'ny YouTube-n'ilay fahitalavitra nasionaly Channel 7 :
Toa tsy manam-bola ry zareo, taorian'ny nandrobàny ny firenena manontolo, dia aiza indray izany izy ireo no mety hahita vola ? Maka izay sisa kely tavela ananan'ny mponina […] MPANGALATRA ny governemanta ary tsy miraharaha ny vahoaka ao aminy, tsy miraharaha antsika rehetra
Mpaneho hevitra iray tao amin'ny иван иванов no tena mino  [ru] fa alain'ilay filohan'ny Kazakhstan Nursultan Nazarbayev , ny volam-bahoaka :
[..] Raha ny marina dia tena tsy mitsinjo ny maha olona mihitsy ilay tolo-dalàna, mpamono olona. Misy te-hanontany ilay Filoha malalantsika Nazarbayev any hoe : Nahoana izy no tena mpanana, maninona no toy ny alika. Nangoniny avy amin'ny firenena maro manerana izao tontolo, izay tia mifety sy misakafo be (ary ny mponina ao Kazakhstan no mandoa ny lany amin'izany rehetra izany) […].
Ny fanemorana ny taonan'ny vehivavy misotro ronono ho 58 ka hatramin'ny 63 taona no tena faran'izay tsy itiavan'ny olona ilay tolo-dalàna. Gauhar Suleimenova , koa dia mba naneho ny heviny tao amin'ny Channel 7, manameloka  [ru] azy io:
Tsy ny vehivavy rehetra no manana asa mora, misy ireo mpanadio ireny trano be ireny, ao ireo mihazakazaka eraky ny tanàna manatitra faktiora sy taratasy maro, ao ireo mijoro mandra-paharivan'ny andro mivarotra eny an-tsena, satria mila manome sakafo ny zanany izy ireo – Asainao manohy ny asany ihany ve izy ireo na dia efa antitra aza ? Eritrereto, ry Serik Abdenov, raha mbola manan-tsaina kely ihany tavela ao anatin'io lohabenao io ianao. Ary ho an'ireo nandrisika azy hilaza zavatra tsy misy fotony tahàka izany, mieritrereta ihany koa ianareo. Tokony tohanana ny vehivavy, Reny izahay, ary na dia izay ihany aza dia efa zava-dehibe tokony hahazoanay haja!
Ao amin'ity fanakiviana ity (ankavia) ity, zazalahy kely iray no manontany an'ilay Ministra teo aloha Serik Abdenov hoe nahoana i Bebenay no voatery hiasa hatramin'ny faha 63 taonany. Ny valiny: “Satria, ry zazalahy, Satria”. Etsy ankavanana, sahala amin'ny hampitombo ny fahosàn'ireo lahy antitra ao Kazakhstan iny lalàna vaovao iny (Sary nozaraina avy tao amin'ilay pejy facebook-n'ilay vondrona  “Патамушта. Патамушта”)
Serik Abdenov, tamin'ny nitenenany ilay hoe “satria-satria”, dia lasa lasibatr'ireo mpanao fampihomehezana sy mpananihany tanaty aterneto.
@_script  nandefa bitsika hoe  [ru] :
Afaka solointsika amin'ny hoe #because-because (satria-satria) ve ny ampahany sasany amin'ny lalàna mifehy ny asa ao Kazakhstan ?
Izay nahazoany valinteny  [ru] avy amin'i @GoogleRoma :
Tsia. Ary fantatrao ve hoe nahoana ? #because-because(satria-satria)
@Miyatov  nanova ny tonon'ilay Hira Sovietika malaza iray mba hampihomehezana  [ru] amin'ilay hadisoana nataon'ilay ministra :
#becausebecause (satriasatria) mpanamory fiaramanidina izahay, dia lanitra no fonenanay. Ny asa aloha. Ahoana izany ny fisotroan-dronononay? Ary ny fisotroan-dronono- any aoriana!)))
Tapitra ny tolona, mitohy ny ady lehibe
i Serik Abdenov voaroaka [ru] noho ny didy navoakan'ny filoha Nursultan Nazarbayev ny 10 Jona no zavatra azo raisina hoe fandresena ho an'ilay fampihomehezana tanaty Aterneto, hatramin'ny fanehoana hatezerana fanaon'ny olona taloha tamin'ny fitorahana atody. Io andro io ihany koa, Ingahy Nazarbayev no nnanakiana mafy  [ru] ny governemanta sy ny fitantanana “mitavozavozan”ny Banky Nasionalyamin'ny fikirakiràna lalàna iray izay “tena zava-dehibe tokoa ara-tsosialy”.
Tamin'ny voalohany, neken'ny Parlemanta izany tolo-dalàna izany ary nalefa tany amin'ny Filoha. Kanefa, nohon'ny fiakaran'ny hatezeram-bahoaka, dia naverin'i  Nazarbayev [ru] tany amin'ny Parlemanta niaraka taminà volavolam-panitsiana [ru] milaza ny hanemorana tsikelikely ny taona hisotroana ronono ka hatombokoa ny Janoary 2018 fa tsy Janoary 2014 toy izay natlotry Parlemanta. Efa neken'ny [ru] solombavambahoaka Kazakh ilay volavolam-panitsiana avy amin'Ingahy Filoha, ary antenaina fa hanao izany koa ny ao amin'ny Loholona”.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/06/26/49325/
 voatoraka atody: http://www.eurasianet.org/node/66888
 namaly hoe : http://www.uralskweek.kz/2013/04/24/potomu-chto-potomu-chto-ministr-truda-abdenov-o-neobxodimosti-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-dlya-zhenshhin/
 Lasa nalaza : http://www.youtube.com/watch?v=ilLU3SQ3moQ
 Hoy : https://www.facebook.com/PatamustaPatamusta
 Nilaza i WoOTTw: http://www.youtube.com/user/WoOTTw
 no tena mino: http://lenta.ru/comments/news/2013/05/23/raise/
 Gauhar Suleimenova: http://www.youtube.com/channel/UC3QzIjyyTlVHds6w42WwFVg
 nandefa bitsika hoe: https://twitter.com/_script/status/327399094169518080
 nahazoany valinteny: https://twitter.com/GoogleRoma/status/327401411426013184
 @GoogleRoma : https://twitter.com/GoogleRoma
 Hira Sovietika : http://www.youtube.com/watch?v=ACYB1XNs04w
 no nnanakiana mafy : http://www.diapazon.kz/kazakhstan/kaz-incidents/52698-nazarbaev-otpravil-na-dorabotku-zakonoproekt-o-pensionnoy-reforme.html
 volavolam-panitsiana : http://www.dw.de/%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5/a-16867514
 neken'ny : http://news.ivest.kz/news/view/id/38639512